Kitchen fosets Single emefu na Draị Down Sprayer
Home / Faucets kichin / Wetuo mmiri / WOWOW Kitchen Faucets Single Handle Na Dọpụta Down Sprayer
WOWOW Kitchen Faucets Single Handle Pull Down Sprayer
Iji isi mmiri a na-ewepụ ewepụ, mmiri igwekota igwe nri dị mfe ịchịkwa. N'ihi katọn nke seramiiki ya, ngwaahịa a na-eme ka ọ dị ogologo oge iji na-agbachapụghị mmiri na nrapụta mmiri ma na-achịkwa oke mmiri.
Ntụziaka nwụnye 2311601C
Chrome usekwu faucet na-agbadata 2311601C
Are na-achọ ụlọ elu kichin kichin kichin kpụkọrọ akụ nke na-eme nke ọma na ụlọ na ụlọ mmanya & ụlọ nri kichin? Chọọ ọzọ! WOWOW jisiri ike mepụta kichin kichin kichin kpụpụta nke na-enye arụmọrụ kacha elu, ọbụlagodi n'oge ọnọdụ siri ike na nke siri ike. Dị ka ị nwere ike ịlele, na saịtị azụmahịa dị ka ụlọ oriri na ọ barsụ restaurantsụ na ụlọ mmanya, ndị ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ na oke ọsọ. Nke a apụtaghị na ndị ọrụ ahụ na-eji ihe esi nri kichin ma ọ bụ ihe ntụ mmanya. Ọ bụ ya mere azụmahịa kichin sink fosets ga-abụ 100% eguzogide ọgwụ na-enye 100% arụmọrụ mgbe niile, ọbụna karị na ihe kasị na-akpata nchekasị.
Ndị nwe ụlọ nri na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na-ahọrọ ịkwanye nsị mmiri esi na kichin, n'ihi na ha bara uru ma na-arụ ọrụ. Ha nwere ike iru ebe ọ bụla ma ọ bụ ebe dị nso na ebe a na-edebe nri. Ọbụlagodi na ụlọ oriri na ọ kitchenụ withụ nke nnukwu ebe a na-asa ya, ebe a na-esi esi ebe a na-asa ihe ga-eru ebe ọ bụla ma ọ bụ ebe ọ bụla ga-asacha. Ihe omume a choro nke oma n'ihi isi ulo eji esi mmiri ofe, bu na isi mmanu ahu na eweghachi ya na mbu ya. Ọ kachasị ọkacha mma site na ọdụ ndọta ndọta iji ghara ịla oge ọ bụla bara uru. Ọbụghị maka ihe efu WOWOW klọọkụ erimeri ụlọ nke WOWOW ejirila ụlọ ebe a na-ere nri na kichin ụlọ n'ụlọ ụwa niile.
Standardskpụrụ ịdị mma nke mmiri ịsa ahụ na kichin esi emebi
Akwụkwọ mmiri chrome kichin kọmpụta WOWOW ka akwadoro n'okpuru BSCI, OA, UPC, na ISO 9001. Nke a na-egosi na WOWOW na-eji ịdị mma kpọrọ ihe ma na-eme ihe niile iji rụpụta na karịa karịa ụkpụrụ ụlọ ọrụ. Ebumnuche gabigara ókè bụ ebumnuche. WOWOW na-eji ihe eji eme ihe dị elu dịka ọla nchara na igwe anaghị agba nchara. A na - enyocha ike nkwụsi ike na nguzogide ya. Ejiri ọla kọpa rụọ ebe a na-asa ihe. Ihe ndị a na-ekwe nkwa akwa nsị mmiri esi arụmọrụ dị elu na-adịgide adịgide, nke na-enweghị mmiri, na-enweghị mmiri na mgbochi.
WWWW, teepu na klọọkụ mmiri WOWOW na-agbadata atụmatụ ndọta magnetik nke ga-ezute ma gafere atụmanya gị. Isi ịgba ahụ ga-anọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị, ọbụlagodi mgbe ogologo oge gasịrị. A nwalele ebe a nwere ndọta magnet karịrị ugboro iri. Ọ dị ka ọ bụrụ na ule ndị a niile, magnetị wuru ewu ka nwere ike idobe isi ịghasa ahụ ozugbo ọ dọpụtasịrị ya.
Efu mmiri sicetịsịsịsịsịịsịsịsịsịsịalasịala Ngwa ngwa na klọọkụ chrom
Ọbụghị naanị WWOWOW si na tebụl krivu WOWOW na-agbadata nnukwu ọnụ ala iji zụta, ọ dịkwa ọnụ ahịa maka ojiji mmiri ya. N'ihi ihe ọhụụ nke Onye ọgbara ọhụrụ Neoperl, a na-ebelata mmiri iji 50% nke ojiji mbụ. Nke a Neoperl Aerator a bidokwala nke ọma, ọ ga-emezu ebumnuche ya ogologo oge. Ọ na-ebelata mmiri na-eji mmiri eme nke ọma, yabụ ị gaghị amatakwa na mmiri ejiri obere mmiri. A na-enye mmiri ahụ oke mgbali elu iji hichaa nke ọma karịa karịa na-enweghị ngwaọrụ mbenata mmiri mmiri Neoperl Aerator. Site n'ụzọ nke na-ebute ụgwọ ego mmiri ruru 50%! Nke a na-egosi na WOWOW na-eji ihe ọhụụ na oriri mmiri akpọrọ ihe. Ọ bụrụ na ọkachaghị, mkpụrụ ego ga-ewepụ Neoperl ABS. Ma ọ bụ iji dochie ma hichaa ya, ma ọ bụ iji mmiri mmiri nke WOWOW chrome kichin drọd ịwụda WOWOW.
Na agbanyeghị, ọnụ ahịa ịzụta klọọkụ kichin na-agbada dị ọnụ ala. WOWOW na-enye gị uru kachasị mma maka ego mgbe ị na-elele ụdị ụlọ ọrụ ahụ na-enye. Usoro mmepụta ya na-arụzi ọrụ nke ukwuu. N'ụzọ dị otú a, WOWOW na-azọpụta ọtụtụ ego, ma na-enyekwa ngwaahịa dị mma nke nwere ike ịsọ mpi ma ọ bụ ọbụna mepee ebe a na-esi na kichin A-ika. WỌR down WWWWWW n'ụlọ nkwanye chrome na WOWOW na-adịkarị mfe maka kichin mmefu ego. Site na njiri ọnụ ahịa ya dị oke ọnụ na ọdịdị ọhụụ, WOWOW gosipụtara na ọ bụ nhọrọ kachasị mma n'ahịa.
Imewe chineke kichin esi ebe eji eme ihe
Ọ bụ ezie na mmiri iyi nke WOWOW dị na kichin dabara nke ọma, ọ pụtaghị na WOWOW emebiwo ụdị, mmebe na arụmọrụ. Na ntụle! Ejiri nlezianya a rụchaa ebe a na-asa kichin ma ọ bụ klọọkụ kichin. Ihe osise a dị elu yiri swan mara mma ma jiri aka ya wee rụọ ya nke ọma. Isi mmesa ahụ na-enye aka na nhazi ya n’oge a.
Banyere arụmọrụ, ngịga mmiri chrome kichin na-agbadata na-enye usoro 3 mmiri: ekpocha, iyi na ịgba. Site na usoro kpochapu pụrụ iche, a na-amanye mmiri dị ka aqua-blade iji sachaa efere ndị ruru unyi na kichin na-asa ngwa ngwa na ike. Flowdị asọda siri ike dabara adaba maka obere mmiri, dịka ọmụmaatụ mgbe ị na-asa akwụkwọ nri ma ị chọghị imebi ha. N'ikpeazụ, site na iji ụdị ịgba ahụ ị nwere ike jupụta ite mmiri n'ime obere oge.
Arụmọrụ kachasị mma nke ebe a na-esi kichin kichin arụ ọrụ agbada
Ptmịkọta otu aka na-agbadata ma kwatuo ịgba, WOWOW chụpụsị sịnịma chrome na-arụ ọrụ dị mfe iji rụọ ọrụ. E wezuga ya, isi iyi ntụgharị ọkwa ogo 360 na-enyere gị aka rụọ ọrụ gị karịa, na-azọpụta gị oge na mbọ. Ọkpụkpụ dọpụtaara na-enye usoro ntụgharịrị dị mma. Otu olulu esi ebe a na-esi na kọmpụta kporo chrome esi na ya pụta apụ n'ihi arụmọrụ ya adaba.
Na ngwụcha, ngịga ngwa ngwa chrom kichin dọrọ dị mfe iji wụnye. Ezubere ọnụ mmiri a na-eji aka nri nke a na-ejikọ aka nke arc ga-adaba na ebe ndozi kichin 1 ma ọ bụ atọ. Kwesighi ichegbu onwe gị banyere nsogbu estrogen n'ihi oghere ndị tara akpụ, dị ka WOWOW na-enye gị mbadamba ọla iji kpuchie oghere ọ bụla. WOWOW na-enyekwa ihe niile echichi nke ịchọrọ iji wụnye kichin drọọsị chrome a, gụnyere glọọlụ, teflon teepu na ngwaọrụ. Allationwụnye akwa WWOWOW kichin esi mmiri ya mere na-aga dịka ikuku!
Ihe bara uru nke ebe a na-asa ihe na krivu chineji na-agbadata na obere okwu:
 Ọ na-enye kichin ọ bụla
 Elu siri ike
Head Isi iyi na-adọrọ adọrọ
Functions Ihe ato ato
SKU: 2311601C Categories: Faucets kichin, Wetuo mmiri Tags: Naanị aka, igwekota igwekota, Igwe anaghị agba nchara
22 x 11.1 x 3 sentimita
WOWOW Bridge Kitchen imi igwekota Kpatụ - Bru ...